Tandindonin-doza ny tokatandroka mainty ao Zimbaboe noho ny fanafoanan’i Shina ny fandraràna nihatra 25 taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Ελληνικά, Français, Español, 繁體中文, English
Namoaka fanambaràna ny governemanta Shinoa ny 31 Oktobra 2018 izay nanambara ny fanafoanana ny fandraràna nihatra 25 taona amin'ny fampiasana ny taolan'ny tigra sy ny tandroky ny rhinocéros, ka mahatonga ny fampiasana ny ampahany “azo avy amin'ireo biby voahaza ho an'ny tanjona siantifika, ny fitsaboana ary ny kolontsaina” ho ara-dalàna.
Nilaza ny Vaomieram-panjakana Shinoa fa azon'ny “mpitsabo matihanina any amin'ny hôpitaly goavana “ampiasaina ny vovoka tandroka rhinocéros sy ny taolan'ny tigra maty. Tsy maintsy ahazoana alalana avy amin'ny toeram-piompiana nomena alalana ny vokatra biby, ary azo ampiasaina amin'ny “fifanakalozana ara-kolotsaina raha toa ka ankatoavin'ny manampahefana ara-kolontsaina” ny ampahan'ny biby izay sokajiana ho “vakoka” .
Nampiahiahy ireo mpandala ny tontolo iainana izay naminavina ny firongatry ny varotra tandroka rhinocéros (tokatandroka) ao amin'ny varo-maizina izay efa miroborobo avy amin'ny fihazana tsy ara-dalana ny fanambarana.
Nilaza ireo mpandala ny tontolo iainana fa fihemorana lehibe amin'ny ezaka fiarovana ny biby tsy ho fongana ity fanapahan-kevitra ity ary mety ho tandindonin-doza noho izany ireo rhinocéros maherin'ny 30.000 sy ny tigra miisa 3.900 any anaty ala.
Vao tamin'ny volana lasa teo tao Zimbaboe, nitifitra rhinocéros mainty miisa efatra ireo mpihaza biby tsy ara-dalana tao anatin'ny roa volana. Niahiahy ireo vondrona mpihaza ireo ihany tamin'ny tranga miisa telo ny Valan-javaboarin'i Zimbaboe sy ny Manampahefana misahana ny Fitantanana ny Biby sy ny Zavamaniry any anaty ala . Na izany aza, anefa dia tsy nisy ny fisamborana natao. Ripaka noho ny fihazana tsy ara-dalana ny valan-javaboary nasionaly marefo ao Zimbaboe, ary nahatonga azy ireo ho marefo eo anatrehan'ny mpanafika.
Tao amin'ny Twitter, nandefa ny sarin'ny rhinocéros (tokatandroka) mihosin-dra sy potika i Sharon Hoole, mpiaro ny natiora, ary nitaraina hoe:
Tena mampalahelo! Tokony ho mailo hatrany ireo miaramilantsika mpiandry ny valan-javaboary. Mirehitra ny firenena. Manjaka ny tsy fanarahan-dalana. Mirongatra ny heloka bevava amin'ny biby sy ny zavamaniry anaty ala noho ny tsimatimanota. Mamadika ireo mpiompy sy mpiambina ny ala. Iza no hiaro ny aina?
Navesatra tokoa ho an'ny mpiaro ny tontolo iainana any Zimbaboe izay efa miatrika ny tsy fahampian'ny loharanom-bola noho ny krizy ara-toekarena lalina ny fanambaràn'i Shina.
Amin'ny maha filoha voafidy vaovao azy dia miady ho amin'ny fametrahana ny fanavaozana ara-drafitra i Emmerson Mnangagwa ary mitolona amin'ny vaovao ny firenena fa noahiahiana ho nandray anjara tamin'ny andianà varotra tandroka elefanta tsy ara-dalàna tamin'ny ambaratongan'ny governemanta ambony indrindra ny vadin'ny filoha Grace Mugabe (vadin'i Robert Mugabe nesorina). Tao anatin'ny volana maromaro nandraisany fahefana, nanamafy ampahibemaso ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana i Mnangagwa ho ampahany amin'ny filazan'ny governemanta vaovao hanoherana an'i Grace Mugabe ho “mpanondrana vangin'elefanta an-tsokosoko“.
Na dia teo aza izany dia nilaza ireo mpandala ny tontolo iainana fa tsy mbola manana loharanom-bola ampy izy ireo mba hanamafisana ny fiarovana sy hampiroboroboana ny fahaiza-manao amin'ny fanaraha-maso sy ny fitsongona dia ireo mpihaza tsy ara-dalana any amin'ny valan-javaboary nasionaly any Zimbaboe. Matahotra izy ireo fa vao mainka hanasarotra ny toe-draharaha ny fanafoanan'i Shina amin'ny ampahany ny politikan'ny fandrarana nihatra 25 taona.
Ao Zimbaboe no ahitana ny rhinocéros mainty faha-efatra betsaka indrindra eran-tany. Andiana mpihaza tsy ara-dalana no fantatra fa manapotika ny endriky ny rhinocéros rehefa manaisotra ny tandrok'izy ireo, ka mamela azy ireo ho faty miadana ao anatin'ny fangirifiriana.
Miantso izany ho ady amin'ny rhinocéros mainty ny sasany amin'ireo mpandala ny tontolo iainana, tsy any Zimbaboe ihany, fa any amin'ireo firenena miisa efatra izay misy ireo rhinocéros mainty “tandindonin-doza” araka ny nosokajian'ny World Wildlife Fund (WWF). Raha tsy misy ny firotsahana an-tsehatra haingana dia mety ho lany tamingana tanteraka izy ireo.